Mhlawumbe njalo umshayeli ongumakad 'ebona ebhekene nenkinga enjalo, njengoba uwoyela avuzayo aphume isembozo injini valve. Isizathu salokhu kuyinto endala gasket ezigugile. Ngokuvamile, le nkinga ukhathazekile abanikazi izimoto yasekhaya. Nokho, lokhu akusho ukuthi izimoto angaphandle ku ingozi uwoyela ukuvuza kuyehla kube zero. Lesi simo singenzeka nge ngokuphelele wonke umuntu, ngakho-ke, ukungaxhamazeli, kudingeka ngekhanda izinyathelo, okuyinto kuhilela ukwenana ikhava valve gasket. Ngezansi sizoxoxa ngokuningiliziwe yonke inqubo kokufaka nokususa izingxenye.
Njengoba ezothatha isikhundla ikhava umphini gasket "Audi" futhi "Ford"
Noma yimuphi umsebenzi ukulungisa imoto kuqedile ngaphandle nqubo yokulungiselela. Kulokhu, esikhundleni ikhava umphini gasket kuhambisana wekulihlanta kwesembozo uqobo kusukela amafutha engine. Kuyinto ngokwanele ukuba uneminye indwangu ezingadingekile. Manje sithatha njalo lamathuluzi bese ukusebenza.
Ukuze uqale, thatha izandla ekhanda 10 mm (kungakuhle ukuthi kwaba umsindo) kanye uyasikrufulula zonke imishudo izikhonkwane. Ngemva kwalokho, nqamula isigwedlo kusukela carburetor. It ixhunywe control traction mpintsha valve. Ingabe-ke uqobo enze esikhundleni. Ukuze wenze lokhu, phakamisa ikhava up valve, Pheqa gasket ubudala bese uyalikhipha. Uma kudingekile, ungakwazi ngixhumane ke lokususa screwdriver. Manje ufake entsha ingxenye. Kodwa ngaphambi kokuthi wenze njalo, thatha isiqeshana amanikiniki into engenamsebenzi Sula ahlanzeke izingxenye esihlalweni. Kulesi sigaba, kungaba bazitshela ukuthi esikhundleni umphini ikhava gasket "Ford" noma "Audi" yaqedwa ngempumelelo. Singagcina ngokubu- qinisa imishudo obandayo izikopelo futhi uhlole ukuvuza.
Ngemva esikhundleni ikhava umphini gasket kuqedile, kungcono ukuqala injini bese ulinda kuze kube lithola izinga lokusebenza yayo. Khona-ke udinga ukuhlola ezingeni amafutha esisele phezu dipstick futhi, uma kunesidingo, uthele uqhoqhoqho entsha. Ngesikhathi sonke ikhava esikhundleni umphini gasket kukuthatha Ningabizi lutho ngaphezu kwemizuzu engu-15.
Kufanele ushintshe le ngxenye Kangaki?
Prakthiza ebonisa ukuthi ikhava umphini gasket ehluleka kaningi - zonke amakhilomitha ayinkulungwane 7-8 (3 izinyanga wokusebenza). Kodwa ungalindi kuze umshini wokubonisa izinga lejubane kwakhiwa run 7000th. Gasket seyonakele ngaphambi, ngakho ngaso sonke isikhathi ukubheka ngaphansi hood futhi uqiniseke ukuthi ulayini uxhumano eduze ekhanda futhi ikhava ekhanda is hhayi kwakhiwa uwoyela amabala. Uma zivela, wazi: uphawu elahlekile ubuqiniso balo, kufanele esikhundleni.
Abanye abanikazi imoto ukushintsha lento kulelo nalelo ukushintshwa uwoyela. Kuthiwa kuba impela ngamabomu, futhi isinyathelo ezifanele. Okokuqala, emva Gulf okusamanzi entsha kanokusho uku ngamaphesenti angu-100 ukuqinisekisa ukuthi akusho ageleze kusuku olulandelayo. Okwesibili, lapho uvula isivalo ngesikhathi esikhundleni izinto ungakwazi ngesandla kutholakale umsuka wendaba yesihluku bafake isikhathi.
Ngakho, sabuka izimiso eziyisisekelo esikhundleni valve ikhava gasket futhi wathola ukuvama kwale nqubo.
Kuyini yokwelapha SCENAR? SCENAR-therapy: izimpawu, contraindications, ukubuyekezwa
Dahlias Pompone: ezikhula imbewu